မြန်မာပြည်မှ ယောက်ကျား ပြည့်တန်စာ တစ်ယောက်ရဲ ရင်ဖွင့်သံများ - APANNPYAY
/ မြန်မာပြည်မှ ယောက်ကျား ပြည့်တန်စာ တစ်ယောက်ရဲ ရင်ဖွင့်သံများ မြန်မာပြည်မှ ယောက်ကျား ပြည့်တန်စာ တစ်ယောက်ရဲ ရင်ဖွင့်သံများ Apann Pyay
မြန်မာပြည်မှ ယောက်ကျားလေး ပြည့်တန်စာ
တကယ်တမ်းတော.လည်း ဒီကိစ္စမျိုးက လူငယ်ထုကြားထဲ ဟိုးတုန်းတည်းက ပြောနေကြသော အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို. ယဉ်ကျေးမှု နှင်. ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆုံးအမများ ကြားကြီးပြင်းရသော ၊ မိန်းကလေး ဆိုတာ အသက်နဲ. လူလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး ... အရှက်နဲ. လူလုပ်တာ ၊ မိန်းမတို.အိနြေ္ဒ ရွှေပေးလို.မရဆိုသော စကားလုံးများကြီးပြင်းရသော လူ.အသိုက်အ၀န်းကြား ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ.လား လို.လည်း သံသယ ရှိကြသည် ။ သို.သော် ကြားဖူးသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော ......ဈေးရှေ.မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ၀တ်ပြီး ရင်ဘတ်မှာ နှင်းဆီပန်းထိုးထားရင် သူ.ဘာသာလာခေါ်လိမ်.မယ်ဟူသော မည်သူစပြောမှန်းမသိသည်. စကားစုအကြား အချို.ကလည်း စိတ်ဝင်စားကြသည် ။ ခုတော. ဒါမျိုးတွေ တကယ်ရှိတာလား ဟု တအံ.တသြ ဖြစ်ရသလို ယခင်က ဟုတ်သယောင်ယောင်ကိစ္စ ခုလိုဆိုတော. ဟုတ်တာသေချာသွားပြီဖြစ်သည် ။ အားလုံးလေ.လာ၍ရရန် ထို သတင်းဆောင်းပါးကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် ။
လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ဖြင့် မြွေတစ်ကောင်က ခါးလယ်မှဖြတ်ကာ တစ်ဆင့်ချင်း တစ်ရစ်ချင်းတက်လာနေသလို ခံ စားရသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မှိန်ပြပြမီးရောင် အောက်တွင် သိုင်းဖက်ထားသော လက်တစ်စုံ က မြွေတစ်ကောင်လို သူ့ကိုရစ်ပတ်သိုင်းဖက် ထားသည်။ သူမျက်လုံးလေး မှေးပြီးကြည့်တော့ သူမ၏မျက်လုံးများက ရမ္မက်ခိုးများဖြင့် တောက် ပနေသည်။ သူ့မျက်နှာပေါ်တွင် သူမ၏ဆံပင်များ က ဝေ့ဝဲဖုံးအုပ်နေသည်။ မသိမသာမှုတ်ထုတ် မိသော သူ၏သက်ပြင်းခိုးတွင် သူမဆံသားတချို့ လှုပ်ခါသွားသည်။
အနွေးဓာတ်မပါသော သူ့ အနမ်းတွင် သူမ၏နှုတ်ခမ်းများ ပွင့်ဟလှုပ်ရှား သွားသည်။ မကြာမီမှာပင် သူအကြိမ်ကြိမ်မှားခဲ့ ဖူးပြီး မနှစ်မြို့သော ခရီးဆုံးကိုရောက်ချေဦးတော့ မည်။ သည်လိုနှင့်ပင် ခါးသီးသောညထဲ၌ သူ့ ဘဝသည် စုံးစုံးမြုပ်ခဲ့ရလေသည်။
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကျကာ အိမ်ပေါ် မှ ဆင်းလာပြီးနောက် နားခိုစရာအဖြစ် သူငယ် ချင်းတစ်ဦး၏ အခွေဆိုင်တွင်နေရသော သူ့ဘဝ နောက်ကြောင်းကို ကိုဇင်(အမည်လွှဲ)က ပြန်ပြော ပြခဲ့သည်။
''ကျွန်တော် အဲဒီတုန်းက နေစရာမရှိ တော့ သူငယ်ချင်းကိုပြောပြီးနေခဲ့ရတာ။ အခွေ ဆိုင်က တစ်နေကုန်ဖွင့်တော့ ညဘက်ကျတော့ ကျွန်တော်ညအိပ်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေတယ်လေ။ အခွေဆိုင်ဆိုပေမယ့်လဲ မြောင်းပေါ်ခွတင်ဖွင့် ထားတာ။ ဆိုင်က လူတစ်ကိုယ်စာ အိပ်ရုံလေး တော့ရတာပေါ့ဗျာ'' ဟု ကိုဇင်ကပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
သူ့အနေဖြင့် နားခိုရာဗီဒီယိုဆိုင်လေး သို့ ညအိပ်ချိန်လေးပဲပြန်လာပြီး နေ့ပိုင်းအချိန် များတွင် ငွေရပေါက်လမ်းတချို့ကို ရှာဖွေလုပ် ခဲ့ရသည်။
''အိမ်ကဆင်းလာတာဆိုတော့ ငွေက ဘယ်ကရှာရမှန်းလဲမသိဘူး။ အိမ်ပေါ်ကဆင်း ခါစတုန်းက ကြို့ကုန်းဘက်မှာ ပီနံအိတ်တွေကို ဓားနဲ့ခုတ်ဖြတ်ရတဲ့အလုပ်လဲ လုပ်ခဲ့ရတယ်။ အဲ အလုပ်က သုံးဖို့စွဲဖို့တော့ ရတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းပြန်ဖြေဖို့ စုဖို့ဆောင်းဖို့ အတွက် မလောက်ဘူးလေ''ဟုပြောသည်။
တစ်နေကုန်တစ်နေခန်း ပီနံအိတ်များ ကို ဓားနှင့်ခုတ်ရခြင်းအပေါ် ကြာတော့ ကျန်းမာ ရေးထိခိုက်နိုင်သည့်အတွက် ယင်းအလုပ်မှထွက် လိုက်သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် သူငယ်ချင်း ချိတ်ပေးသည့်အလုပ်ကိုပဲ ဇောက်ချလုပ်ဖြစ်ခဲ့ သည်။
လိုအပ်နေသည့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရသည့်အလုပ်ဖြစ် သည်။ သူတို့အခေါ် 'ဂျေဂလို'ဖြစ်သည်။
''ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီလိုလုပ်စား တဲ့လူတွေကို ဂျေဂလိုလို့ခေါ်တာပဲ။ သေချာ တော့မသိဘူး။ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းက အမျိုး သမီးတချို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ သူတို့နဲ့လိုက် နေပေးရတဲ့အလုပ်ပေါ့။ ပထမဆုံးကြုံတဲ့အမျိုး သမီးက အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးဗျ။ ကလေး တစ်ယောက်လဲရှိတယ်။ ကလေးက နှစ်နှစ်လောက် တော့ရှိမယ်။ သူ့ယောက်ျားက သင်္ဘောသား၊ နိုင်ငံခြားသွားနေရတော့ သူ့ယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန် မှာ ကျွန်တော်က သူ့အလိုကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတာ လေ''ဟု ဂျေဂလိုဘဝ (သို့မဟုတ်) Sex worker တစ်ဦးအဖြစ် ပထမဦးဆုံးဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့်အချိန်ကို ပြန်ပြောပြသည်။
''အဲအမျိုးသမီးက ကလေးရှိတော့ အ ရင်ဆုံး သူ့ကိုသိပ်ရတာပေါ့။ နှစ်နှစ်ဆိုတော့ ဘာ မှမသိသေးတဲ့ အရွယ်ဆိုပေမယ့် ခုတင်တစ်ခု တည်းမှာ လင်မယားလိုနေရမှာဆိုတော့ ကလေး ကို အရင်သိပ်ရတယ်လေ။ တစ်ခါတလေဆိုရင် အဲ့ကလေးကို အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမှာ ထားသိပ်ရတာ မျိုးလဲ ရှိခဲ့တယ်''ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် သူ့အနေနှင့် Sex worker အနေဖြင့် ဘဝကိုရှင်သန်ရင်း ထူးထူးခြားခြားဖြတ် သန်းခဲ့ရမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။ ထူးခြားသော် လည်း ထွက်ပြေးချင်လောက်အောင်လည်း စိတ် ပေါက်ခဲ့သည်ဟု ရင်ဖွင့်ခဲ့သည်။
''လှိုင်သာယာက Beauty Salon ဖွင့် ထားတဲ့ အမျိုးသမီးသုံးဦးရဲ့အိမ်မှာ သူတို့ကိုဖျော် ဖြေပေးရတာ။ သူတို့က ယောက်ျားခွန်အားတိုး ဆေးတွေ ပြီးတော့ ဘလက်လေဘယ်တွေကအစ ဝယ်ပေးထားတာ။ အိမ်ထဲကနေ မထွက်ရဘူး။ သူတို့နဲ့အလှည့်ကျနေပေးခဲ့ရတာလေ။ အဲဒီသုံး ဦးက အမျိုးတွေဗျ။ တစ်ဦးက ဆိုင်ဖွင့်နေရင် အိမ် ကိုပြန်လာ၊ တစ်ဦးက အိမ်ထဲမှာ ထမင်းဟင်း ချက်နေရင် တခြားတစ်ဦးနဲ့အတူနေရတာ။ ပြီး တော့ အဲဒီသုံးဦးနဲ့က နေ့စဉ် အဆက်မပြတ်သလို ဆိုတော့ ကျွန်တော် မခံနိုင်တော့ဘူး။
့အလှည့်ကျနေပေးခဲ့ရတာလေ။ နိမ့်နိမ့် လေးရှိတဲ့ လှေကား လေးထစ်လောက်ကိုတောင် ကျွန်တော် လေးဖက်ထောက်တက်နေရတာ။ အဲဒီ တော့ သူတို့လစ်တဲ့အချိန် ထွက်လာခဲ့တယ်'' ဟု ပြောသည်။
ထိုအမျိုးသမီးသုံးဦး နေအိမ်တွင်ရှိ သော ကြိုးဖုန်းဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့်ချိတ်ဆက် ပေးသည့် သူငယ်ချင်းဆီဖုန်းဆက်ကာ အမြန်လာ ခေါ်ရန် ဆက်သွယ်ခဲ့ရကြောင်းပြောပြသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများနှင့်သာမက ဘဲသူ့အနေဖြင့် အခြားသောအမျိုးသမီးများစွာ နှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
အမျိုးသမီးများက ယောက်ျားက နိုင်ငံ ခြားသွားနေလို့၊ ယောက်ျားနဲ့ကွဲနေလို့၊ ယောက်ျား မရှိပေမယ့် ခဏအပျော်ထားချင်တာတို့၊ စပွန် ဆာပေးထားတဲ့ လူမရှိတဲ့အချိန် ထိုမိန်းကလေး နှင့်နေပေးရသည်မှာSex worker တို့ အများဆုံး ကြုံရသည့်ဘဝဖြစ်သည်။
''ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ကြုံခဲ့ရတာက အ သက်အကြီးဆုံးက ၄၁နှစ်ရှိပြီ။ သူက အပျိုကြီး။ နောက်ထပ်မှတ်မှတ်ရရအတွေ့အကြုံက အသက် ခုနစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးမွေးထား တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့လဲ ကျွန်တော်နေပေး ခဲ့ရသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တာကို သူ့ သမီးမြင်သွားတယ်လို့ ကျွန်တော် သံသယရှိမိ တယ်''ဟု ပြန်ပြောပြသည်။
စားပွဲတွင်တင်ထားသည့် ဘီယာခွက် ကို စိုက်ကြည့်ရင်း ''ကျွန်တော် သေချာတယ်။ နောက်ဘဝမှာ လူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ အများကြီးကျူးလွန်ခဲ့မိတယ်။ အဲဒီလူမဆန်တဲ့ ကိစ္စတွေက အရမ်းကိုဆိုးရွားတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်သေရင် နောက်ဘဝ လူပြန်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ငရဲကြီးရှစ်ထပ်မှာ အောက်ဆုံးထပ် ကို ကျမယ့်ကောင်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘဝမှာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဒီအဆိုးရွားဆုံးကိစ္စကို ဘယ်သူ့ကို မှ မသိစေချင်ဘူး''ဟု ထပ်ပြောသည်။
စကားဝိုင်းလေးက ခေတ္တရပ်ဆိုင်း သွားသည်။ ထိုအချိန်တွင် စင်တင်စားသောက် ဆိုင်တစ်ခုမှ အမျိုးသမီးငယ်လေးများ၏ ကြည် နူးဖွယ် သီဆိုသံများက တိတ်ဆိတ်သွားသည့် စားပွဲဝိုင်းထဲ တိုးဝင်လာသည်။
သီချင်းဆိုရင်း စားပွဲဝိုင်းတစ်ခုသို့ ရောက်လာသည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုကြည့်ရင်း ကိုဇင်က ''ကျွန်တော် ဒီဘဝရောက်သွားခဲ့ရတာ က တကယ့်ကို ဘယ်လိုမှ မတတ်သာလွန်းလို့ မတတ်နိုင်လို့ရောက်ခဲ့ရတာ။ နေစရာကလဲမရှိ ဘူး။ အိမ်ကလဲဆင်းလာတာ။ ၁ဝ တန်းကလဲ ကျနဲ့။ အဲဒီအခြေအနေမှာ မထူးတဲ့ဘဝကိုလုပ်ခဲ့ ရတာ။ စင်တင်မှာဆိုနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ၊ ပြီး တော့ တခြား Sex worker မိန်းကလေးတွေဆို ရင်လဲ သူတို့ဘဝမှာ မတတ်သာလို့ ဒီဘဝကိုရောက် သွားခဲ့ကြရတာလို့ထင်တယ်။ ဒါမျိုး ဘယ်သူက လုပ်ချင်မှာလဲ''ဟု Sex worker ဘဝများသို့ ရောက်နေခဲ့သည့် ဘဝများအပေါ် စာနာစွာဖြင့် ပြောပြသည်။
Sex worker အနေဖြင့် အချိန်အတန် ကြာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီး ငွေကြေးအနည်းငယ်စုနိုင် ခဲ့သည့်အချိန်တွင် မိခင်က သတင်းစာမှတစ်ဆင့် လူပျောက်ကြော်ငြာထည့်ကာ ရှာခဲ့သည်။ ယင်း နောက် မိခင်အိမ်ပေါ်သို့ သူတစ်ကျော့ပြန်ရောက် ခဲ့ရသည်။ တစ်ကျော့ပြန်ရောက်တော့ အမေရော အဖေရော ကျန်းမာရေးက ချို့တဲ့နေသည်။
''အဖေက ကိုယ်တစ်ခြမ်း လေဖြတ် သွားတော့ မထနိုင်ဘူး။ အမေကလဲ မျက်လုံးက သိပ်မကောင်းတော့ ဆေးတွေဘာတွေ ကုသဖို့ ငွေလိုနေတယ်။ အဲဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ရှာခဲ့ရတဲ့ငွေနဲ့ ဆေးတွေဘာတွေကုခဲ့တယ်။ ဒီ အလုပ်လုပ်ရင်းရှာခဲ့တဲ့ငွေနဲ့ ကျွန်တော် ၁ဝတန်း ပြန်ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်။ အောင်လဲအောင်ခဲ့တယ်''ဟု ဘဝကိုအရင်းပြုကာ ရှာဖွေခဲ့သည့်ငွေဖြင့် ပြန် လည်အသုံးချခဲ့သည်ကို ပြန်ပြောသည်။
စားသောက်ဆိုင်အတွင်း စားပွဲဝိုင်း များ ပြည့်နှက်လာသည်နှင့်အမျှ သီချင်းသံလေး များက ပြည့်နှက်လာသည်။ စားပွဲဝိုင်းများပြား လာသည်နှင့်အတူ ညဉ့်ကနက်လာသည်။ ကား လမ်းပေါ်မှာ ကားတချို့သွားလာနေဆဲ။ ကိုဇင် တစ်ယောက် လက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်း အမှောင်ထု တွင်းတိုးဝင်သွားခဲ့သည်။
ဓာတ်တိုင်မီးရောင်မှိန် ပြပြရှိနေသေး သော်လည်း ထိုသို့သော ကားလမ်းနံဘေးမီး ရောင်အောက်များ၊ Sex worker များနှင့်ပတ် သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာမည်ကြီးသော သိမ်ကြီး ဈေးတံတားပေါ်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်၊ ပန်းဆိုးတန်း ခုံးကျော်တံတားအောက်ဝန်းကျင်၊ သီရိမင်္ဂလာ ဈေးဟောင်း၊ မင်္ဂလာဈေး၊ တံတားဖြူမှတ်တိုင် အနီးဝန်းကျင်နှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်မှ လမ်းနီ၊ ရိပ်သာမှတ်တိုင် စသည့်နေရာအချို့ မှာ Sex worker တို့၏ ဈေးကွက်နေရာများပင် ဖြစ် ကာ ပြည့်တန်ဆာအချို့က သူတို့ကိုလာခေါ်ကြ မည့်သူများကို ညဉ့်နက်နက်အချိန်များအထိ စောင့်ဆိုင်းနေကြရဆဲဖြစ်သည်။
မွနျမာပွညျမှ ယောကျကြားလေး ပွညျ့တနျစာ လုပျသားစြေးကှကျ သို့မဟုတျ Myanmar Sex Boy Warker
တကယျတမျးတော.လညျး ဒီကိစ်စမြိုးက လူငယျထုကွားထဲ ဟိုးတုနျးတညျးက ပွောနကွေသော အကွောငျးအရာ တဈခုဖွဈသညျ ။ မွနျမာနိုငျငံကဲ့သို. ယဉျကြေးမှု နှငျ. ဘာသာရေးဆိုငျရာ အဆုံးအမမြား ကွားကွီးပွငျးရသော ၊ မိနျးကလေး ဆိုတာ အသကျနဲ. လူလုပျတာ မဟုတျဘူး ... အရှကျနဲ. လူလုပျတာ ၊ မိနျးမတို.အိန်ဒွေ ရှပေေးလို.မရဆိုသော စကားလုံးမြားကွီးပွငျးရသော လူ.အသိုကျအဝနျးကွား ဟုတျမှဟုတျရဲ.လား လို.လညျး သံသယ ရှိကွသညျ ။ သို.သျော ကွားဖူးသညျမှာ ကွာပွီဖွဈသော ......စြေးရှေ.မှာ သပျသပျရပျရပျလေး ဝတျပွီး ရငျဘတျမှာ နှငျးဆီပနျးထိုးထားရငျ သူ.ဘာသာလာချေါလိမျ.မယျဟူသော မညျသူစပွောမှနျးမသိသညျ. စကားစုအကွား အခြို.ကလညျး စိတျဝငျစားကွသညျ ။ ခုတော. ဒါမြိုးတှေ တကယျရှိတာလား ဟု တအံ.တသွ ဖွဈရသလို ယခငျက ဟုတျသယောငျယောငျကိစ်စ ခုလိုဆိုတော. ဟုတျတာသခြောသှားပွီဖွဈသညျ ။ အားလုံးလေ.လာ၍ရရနျ ထို သတငျးဆောငျးပါးကို မူရငျးအတိုငျး ဖျောပွအပျပါသညျ ။
လှုပျလီလှုပျလဲ့ဖွငျ့ မွှတေဈကောငျက ခါးလယျမှဖွတျကာ တဈဆငျ့ခငျြး တဈရဈခငျြးတကျလာနသေလို ခံ စားရသညျ။ ခန်ဓာကိုယျပျေါ မှိနျပွပွမီးရောငျ အောကျတှငျ သိုငျးဖကျထားသော လကျတဈစုံ က မွှတေဈကောငျလို သူ့ကိုရဈပတျသိုငျးဖကျ ထားသညျ။ သူမကျြလုံးလေး မှေးပွီးကွညျ့တော့ သူမ၏မကျြလုံးမြားက ရမ်မကျခိုးမြားဖွငျ့ တောကျ ပနသေညျ။ သူ့မကျြနှာပျေါတှငျ သူမ၏ဆံပငျမြား က ဝဝေဲ့ဖုံးအုပျနသေညျ။ မသိမသာမှုတျထုတျ မိသော သူ၏သကျပွငျးခိုးတှငျ သူမဆံသားတခြို့ လှုပျခါသှားသညျ။
အနှေးဓာတျမပါသော သူ့ အနမျးတှငျ သူမ၏နှုတျခမျးမြား ပှငျ့ဟလှုပျရှား သှားသညျ။ မကွာမီမှာပငျ သူအကွိမျကွိမျမှားခဲ့ ဖူးပွီး မနှဈမွို့သော ခရီးဆုံးကိုရောကျခြဦေးတော့ မညျ။ သညျလိုနှငျ့ပငျ ခါးသီးသောညထဲ၌ သူ့ ဘဝသညျ စုံးစုံးမွုပျခဲ့ရလသေညျ။
ဆယျတနျးစာမေးပှဲကကြာ အိမျပျေါ မှ ဆငျးလာပွီးနောကျ နားခိုစရာအဖွဈ သူငယျ ခငျြးတဈဦး၏ အခှဆေိုငျတှငျနရေသော သူ့ဘဝ နောကျကွောငျးကို ကိုဇငျ(အမညျလှဲ)က ပွနျပွော ပွခဲ့သညျ။
''ကြှနျတျော အဲဒီတုနျးက နစေရာမရှိ တော့ သူငယျခငျြးကိုပွောပွီးနခေဲ့ရတာ။ အခှေ ဆိုငျက တဈနကေုနျဖှငျ့တော့ ညဘကျကတြော့ ကြှနျတျောညအိပျဖို့အတှကျ အဆငျပွတေယျလေ။ အခှဆေိုငျဆိုပမေယျ့လဲ မွောငျးပျေါခှတငျဖှငျ့ ထားတာ။ ဆိုငျက လူတဈကိုယျစာ အိပျရုံလေး တော့ရတာပေါ့ဗြာ'' ဟု ကိုဇငျကပွောပွခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျ။
သူ့အနဖွေငျ့ နားခိုရာဗီဒီယိုဆိုငျလေး သို့ ညအိပျခြိနျလေးပဲပွနျလာပွီး နပေို့ငျးအခြိနျ မြားတှငျ ငှရေပေါကျလမျးတခြို့ကို ရှာဖှလေုပျ ခဲ့ရသညျ။
''အိမျကဆငျးလာတာဆိုတော့ ငှကေ ဘယျကရှာရမှနျးလဲမသိဘူး။ အိမျပျေါကဆငျး ခါစတုနျးက ကွို့ကုနျးဘကျမှာ ပီနံအိတျတှကေို ဓားနဲ့ခုတျဖွတျရတဲ့အလုပျလဲ လုပျခဲ့ရတယျ။ အဲ အလုပျက သုံးဖို့စှဲဖို့တော့ ရတယျဆိုပမေယျ့လဲ ကြှနျတျော ဆယျတနျးပွနျဖွဖေို့ စုဖို့ဆောငျးဖို့ အတှကျ မလောကျဘူးလေ''ဟုပွောသညျ။
တဈနကေုနျတဈနခေနျး ပီနံအိတျမြား ကို ဓားနှငျ့ခုတျရခွငျးအပျေါ ကွာတော့ ကနျြးမာ ရေးထိခိုကျနိုငျသညျ့အတှကျ ယငျးအလုပျမှထှကျ လိုကျသညျ။ ယငျးနောကျပိုငျးတှငျ သူငယျခငျြး ခြိတျပေးသညျ့အလုပျကိုပဲ ဇောကျခလြုပျဖွဈခဲ့ သညျ။
လိုအပျနသေညျ့ အမြိုးသမီးမြား၏ လိုအပျခကျြကို ဖွညျ့ဆညျးပေးရသညျ့အလုပျဖွဈ သညျ။ သူတို့အချေါ 'ဂဂြေလို'ဖွဈသညျ။
''ကြှနျတျောတို့ကတော့ ဒီလိုလုပျစား တဲ့လူတှကေို ဂဂြေလိုလို့ချေါတာပဲ။ သခြော တော့မသိဘူး။ ကြှနျတျောသူငယျခငျြးက အမြိုး သမီးတခြို့နဲ့ မိတျဆကျပေးတယျ။ သူတို့နဲ့လိုကျ နပေေးရတဲ့အလုပျပေါ့။ ပထမဆုံးကွုံတဲ့အမြိုး သမီးက အိမျထောငျသညျအမြိုးသမီးဗြ။ ကလေး တဈယောကျလဲရှိတယျ။ ကလေးက နှဈနှဈလောကျ တော့ရှိမယျ။ သူ့ယောကျြားက သင်ျဘောသား၊ နိုငျငံခွားသှားနရေတော့ သူ့ယောကျြားမရှိတဲ့အခြိနျ မှာ ကြှနျတျောက သူ့အလိုကိုဖွညျ့ဆညျးပေးရတာ လေ''ဟု ဂဂြေလိုဘဝ (သို့မဟုတျ) Sex worker တဈဦးအဖွဈ ပထမဦးဆုံးဖွတျသနျးခဲ့ရသညျ့အခြိနျကို ပွနျပွောပွသညျ။
''အဲအမြိုးသမီးက ကလေးရှိတော့ အ ရငျဆုံး သူ့ကိုသိပျရတာပေါ့။ နှဈနှဈဆိုတော့ ဘာ မှမသိသေးတဲ့ အရှယျဆိုပမေယျ့ ခုတငျတဈခု တညျးမှာ လငျမယားလိုနရေမှာဆိုတော့ ကလေး ကို အရငျသိပျရတယျလေ။ တဈခါတလဆေိုရငျ အဲ့ကလေးကို အိမျရှေ့ဧညျ့ခနျးမှာ ထားသိပျရတာ မြိုးလဲ ရှိခဲ့တယျ''ဟု ပွောသညျ။
ထို့အပွငျ သူ့အနနှေငျ့ Sex worker အနဖွေငျ့ ဘဝကိုရှငျသနျရငျး ထူးထူးခွားခွားဖွတျ သနျးခဲ့ရမှုမြားလညျး ရှိခဲ့သညျ။ ထူးခွားသျော လညျး ထှကျပွေးခငျြလောကျအောငျလညျး စိတျ ပေါကျခဲ့သညျဟု ရငျဖှငျ့ခဲ့သညျ။
''လှိုငျသာယာက Beauty Salon ဖှငျ့ ထားတဲ့ အမြိုးသမီးသုံးဦးရဲ့အိမျမှာ သူတို့ကိုဖြျော ဖွပေေးရတာ။ သူတို့က ယောကျြားခှနျအားတိုး ဆေးတှေ ပွီးတော့ ဘလကျလဘေယျတှကေအစ ဝယျပေးထားတာ။ အိမျထဲကနေ မထှကျရဘူး။ သူတို့နဲ့အလှညျ့ကနြပေေးခဲ့ရတာလေ။ အဲဒီသုံး ဦးက အမြိုးတှဗြေ။ တဈဦးက ဆိုငျဖှငျ့နရေငျ အိမျ ကိုပွနျလာ၊ တဈဦးက အိမျထဲမှာ ထမငျးဟငျး ခကျြနရေငျ တခွားတဈဦးနဲ့အတူနရေတာ။ ပွီး တော့ အဲဒီသုံးဦးနဲ့က နစေ့ဉျ အဆကျမပွတျသလို ဆိုတော့ ကြှနျတျော မခံနိုငျတော့ဘူး။
့အလှညျ့ကနြပေေးခဲ့ရတာလေ။ နိမျ့နိမျ့ လေးရှိတဲ့ လှကေား လေးထဈလောကျကိုတောငျ ကြှနျတျော လေးဖကျထောကျတကျနရေတာ။ အဲဒီ တော့ သူတို့လဈတဲ့အခြိနျ ထှကျလာခဲ့တယျ'' ဟု ပွောသညျ။
ထိုအမြိုးသမီးသုံးဦး နအေိမျတှငျရှိ သော ကွိုးဖုနျးဖွငျ့ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ခြိတျဆကျ ပေးသညျ့ သူငယျခငျြးဆီဖုနျးဆကျကာ အမွနျလာ ချေါရနျ ဆကျသှယျခဲ့ရကွောငျးပွောပွသညျ။
ယငျးကဲ့သို့ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့သာမက ဘဲသူ့အနဖွေငျ့ အခွားသောအမြိုးသမီးမြားစှာ နှငျ့လညျး ရငျဆိုငျခဲ့ရသညျ။
အမြိုးသမီးမြားက ယောကျြားက နိုငျငံ ခွားသှားနလေို့၊ ယောကျြားနဲ့ကှဲနလေို့၊ ယောကျြား မရှိပမေယျ့ ခဏအပြျောထားခငျြတာတို့၊ စပှနျ ဆာပေးထားတဲ့ လူမရှိတဲ့အခြိနျ ထိုမိနျးကလေး နှငျ့နပေေးရသညျမှာSex worker တို့ အမြားဆုံး ကွုံရသညျ့ဘဝဖွဈသညျ။
''ကြှနျတေျာ့ဘဝမှာ ကွုံခဲ့ရတာက အ သကျအကွီးဆုံးက ၄၁နှဈရှိပွီ။ သူက အပြိုကွီး။ နောကျထပျမှတျမှတျရရအတှအေ့ကွုံက အသကျ ခုနဈနှဈလောကျရှိတဲ့ မိနျးကလေးတဈဦးမှေးထား တဲ့ မိနျးကလေးတဈဦးနဲ့လဲ ကြှနျတျောနပေေး ခဲ့ရသေးတယျ။ ကြှနျတျောတို့နထေိုငျတာကို သူ့ သမီးမွငျသှားတယျလို့ ကြှနျတျော သံသယရှိမိ တယျ''ဟု ပွနျပွောပွသညျ။
စားပှဲတှငျတငျထားသညျ့ ဘီယာခှကျ ကို စိုကျကွညျ့ရငျး ''ကြှနျတျော သခြောတယျ။ နောကျဘဝမှာ လူဖွဈမှာမဟုတျဘူး။ ဘာကွောငျ့ လဲဆိုတော့ ကြှနျတျော လူမဆနျတဲ့လုပျရပျတှေ အမြားကွီးကြူးလှနျခဲ့မိတယျ။ အဲဒီလူမဆနျတဲ့ ကိစ်စတှကေ အရမျးကိုဆိုးရှားတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောသရေငျ နောကျဘဝ လူပွနျဖွဈမှာ မဟုတျဘူး။ ငရဲကွီးရှဈထပျမှာ အောကျဆုံးထပျ ကို ကမြယျ့ကောငျ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ ဘဝမှာ ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ဒီအဆိုးရှားဆုံးကိစ်စကို ဘယျသူ့ကို မှ မသိစခေငျြဘူး''ဟု ထပျပွောသညျ။
စကားဝိုငျးလေးက ခတ်ေတရပျဆိုငျး သှားသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ စငျတငျစားသောကျ ဆိုငျတဈခုမှ အမြိုးသမီးငယျလေးမြား၏ ကွညျ နူးဖှယျ သီဆိုသံမြားက တိတျဆိတျသှားသညျ့ စားပှဲဝိုငျးထဲ တိုးဝငျလာသညျ။
သီခငျြးဆိုရငျး စားပှဲဝိုငျးတဈခုသို့ ရောကျလာသညျ့ မိနျးကလေးတဈဦးကိုကွညျ့ရငျး ကိုဇငျက ''ကြှနျတျော ဒီဘဝရောကျသှားခဲ့ရတာ က တကယျ့ကို ဘယျလိုမှ မတတျသာလှနျးလို့ မတတျနိုငျလို့ရောကျခဲ့ရတာ။ နစေရာကလဲမရှိ ဘူး။ အိမျကလဲဆငျးလာတာ။ ၁ဝ တနျးကလဲ ကနြဲ့။ အဲဒီအခွအေနမှော မထူးတဲ့ဘဝကိုလုပျခဲ့ ရတာ။ စငျတငျမှာဆိုနတေဲ့ မိနျးကလေးတှေ၊ ပွီး တော့ တခွား Sex worker မိနျးကလေးတှဆေို ရငျလဲ သူတို့ဘဝမှာ မတတျသာလို့ ဒီဘဝကိုရောကျ သှားခဲ့ကွရတာလို့ထငျတယျ။ ဒါမြိုး ဘယျသူက လုပျခငျြမှာလဲ''ဟု Sex worker ဘဝမြားသို့ ရောကျနခေဲ့သညျ့ ဘဝမြားအပျေါ စာနာစှာဖွငျ့ ပွောပွသညျ။
Sex worker အနဖွေငျ့ အခြိနျအတနျ ကွာ ကငျြလညျခဲ့ပွီး ငှကွေေးအနညျးငယျစုနိုငျ ခဲ့သညျ့အခြိနျတှငျ မိခငျက သတငျးစာမှတဈဆငျ့ လူပြောကျကွျောငွာထညျ့ကာ ရှာခဲ့သညျ။ ယငျး နောကျ မိခငျအိမျပျေါသို့ သူတဈကြော့ပွနျရောကျ ခဲ့ရသညျ။ တဈကြော့ပွနျရောကျတော့ အမရေော အဖရေော ကနျြးမာရေးက ခြို့တဲ့နသေညျ။
''အဖကေ ကိုယျတဈခွမျး လဖွေတျ သှားတော့ မထနိုငျဘူး။ အမကေလဲ မကျြလုံးက သိပျမကောငျးတော့ ဆေးတှဘောတှေ ကုသဖို့ ငှလေိုနတေယျ။ အဲဒီလိုနတေဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျတျော ရှာခဲ့ရတဲ့ငှနေဲ့ ဆေးတှဘောတှကေုခဲ့တယျ။ ဒီ အလုပျလုပျရငျးရှာခဲ့တဲ့ငှနေဲ့ ကြှနျတျော ၁ဝတနျး ပွနျဖွနေိုငျခဲ့တယျ။ အောငျလဲအောငျခဲ့တယျ''ဟု ဘဝကိုအရငျးပွုကာ ရှာဖှခေဲ့သညျ့ငှဖွေငျ့ ပွနျ လညျအသုံးခခြဲ့သညျကို ပွနျပွောသညျ။
စားသောကျဆိုငျအတှငျး စားပှဲဝိုငျး မြား ပွညျ့နှကျလာသညျနှငျ့အမြှ သီခငျြးသံလေး မြားက ပွညျ့နှကျလာသညျ။ စားပှဲဝိုငျးမြားပွား လာသညျနှငျ့အတူ ညဉျ့ကနကျလာသညျ။ ကား လမျးပျေါမှာ ကားတခြို့သှားလာနဆေဲ။ ကိုဇငျ တဈယောကျ လကျပွနှုတျဆကျရငျး အမှောငျထု တှငျးတိုးဝငျသှားခဲ့သညျ။
ဓာတျတိုငျမီးရောငျမှိနျ ပွပွရှိနသေေး သျောလညျး ထိုသို့သော ကားလမျးနံဘေးမီး ရောငျအောကျမြား၊ Sex worker မြားနှငျ့ပတျ သကျပွီး ရနျကုနျမွို့ရှိ နာမညျကွီးသော သိမျကွီး စြေးတံတားပျေါနှငျ့ အနီးတဈဝိုကျ၊ ပနျးဆိုးတနျး ခုံးကြျောတံတားအောကျဝနျးကငျြ၊ သီရိမင်ျဂလာ စြေးဟောငျး၊ မင်ျဂလာစြေး၊ တံတားဖွူမှတျတိုငျ အနီးဝနျးကငျြနှငျ့ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးပျေါမှ လမျးနီ၊ ရိပျသာမှတျတိုငျ စသညျ့နရောအခြို့ မှာ Sex worker တို့၏ စြေးကှကျနရောမြားပငျ ဖွဈ ကာ ပွညျ့တနျဆာအခြို့က သူတို့ကိုလာချေါကွ မညျ့သူမြားကို ညဉျ့နကျနကျအခြိနျမြားအထိ စောငျ့ဆိုငျးနကွေရဆဲဖွဈသညျ။